Inona avy ireo tombony azo amin'ny touch all-in-one? - Vaovao - Shenzhen VisionVision Technology Co. LTD
Home > News > Vaovaon'ny indostria > Inona avy ireo tombony azo amin'ny touch all-in-one?
Ny masinina rehetra mikasika ny rehetra dia mampifandray sy manara-penitra tokoa. Ny masinina mikasika ny rehetra dia manatsara ny fahombiazan'ny asan'ny olona. Amin'ny maha fitaovana fampidirana azy dia manana tombony maro ny efijery mikasika ny rehetra, toy ny fahamendrehana sy ny faharetana, valiny haingana, fitehirizana habaka ary fifandraisana mora. Afaka mahazo haingana ny fampahalalana tadiavin'izy ireo ny mpampiasa amin'ny fikasihana moramora ny efijenin'ny masinina amin'ny rantsan-tànany, manao izay hahamora kokoa ny fifandraisana amin'ny solosaina. Amin'ny maha milina teknolojia avo lenta azy, ny milina fikitika iray manontolo dia nanolo tsikelikely ny toeran'ny efijery madio, mamela ny mpampiasa hahatsapa ny toetra mampiavaka ny fifandraisana malalaka eo amin'ny olombelona sy ny milina, ary hisy vokany tsara amin'ny fifandraisana.
Touch all-in-ones dia be mpampiasa amin'ny indostria mifandraika amin'izany, indrindra amin'ny indostrian'ny vola ho an'ny fangatahana orinasa sy fampirantiana fampahalalana mifandraika, telecom, fangatahana orinasan-tseranana na efitrano fivarotana orinasa Unicom na fampiroboroboana vokatra, toeram-pivarotana lehibe ary fivarotana lehibe fampiroboroboana vokatra hafa vokatra Ho an'ny rindranasa toy ny fangatahana, ny sinema lehibe dia ampiasaina amin'ny fampisehoana horonan-tsary sy fankafizan-tsarimihetsika, fandefasana serivisy ary fampahalalana amin'ny indostrian'ny fandraharahana, ary ny fampiharana fampiharana dia azo ampiasaina amin'ny fampianarana haino aman-jery na ampiarahana amin'ny solaitrabe elektronika hahatratra fampianarana multimedia. Ho fanampin'ireo indostria etsy ambony, misy fampiharana maro azo ampiasaina. Ao amin'ny indostrian'ny milina fanaovana dokam-barotra nentim-paharazana, ny milina fikitika iray manontolo dia afaka mampiseho mazava kokoa ny atin'ny fampiroboroboana ary miteraka vokatra tsara eo amin'ny fifandraisana. Ny habetsaky ny varotra an'ny milina fikitihana rehetra, indrindra ny marindrano, dia nanomboka tamin'ny tapany faharoa tamin'ny 2013 ka hatramin'izao Tamin'ny telovolana voalohany 2014, nisy ny fiakarana avo lenta. Ka maninona no mihamaro ny mpanjifa mankafy ny rehetra? Inona avy ireo tombony?
Andao hanomboka amin'ny fahatsapana mahazatra mikasika ny milina iray. Ny milina touch all-in-one dia mampifandray ny efijery efa voavolavola farany, ny fibaikoana indostrialy, ny solosaina ary ny teknolojia hafa, izay afaka mahatsapa ny fangatahana fampahalalana ampahibemaso, ary manana scanners, scanners, mpamaky karatra, mpanonta micro ary peripheraly hafa izay afaka mahatsapa ny dian-tànana fanatrehana, karatra fanosehana, fanontana sns. filana manokana. Ny fampidirana rindrambaiko mifandraika dia afaka mahatsapa asa fampiharana fanampiny. Ny efijery mikasika dia misy efijery fanoherana tariby efatra na dimy, efijery onjam-peo akustika an-tsary, efijery infrared, horonan-tsary nano touch holographic ary efijery mikasika hafa tena tsara any an-trano sy any ivelany, izay afaka mamaly ny filan'ny mpampiasa amin'ny faritra sy toerana samihafa. Na izany aza, noho ny fiakaran'ny vidin'ny infrared mikasika ny efijery dia ny infrared touch touch izao no be mpampiasa. Ny milina touch all-in-one dia vokatra mikasika izay manangona ny efijery mikasika sy rindrambaiko mifandraika ary manome azy ireo fonosana ivelany hanamarinana ny fampiasana azy.
Ny efijery mikasika ny capacitive dia tsy mila fampiasana totozy na fitendry. Ny fiasan'ny solosaina rehetra dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fanokafana na famafana kely ny efijery, mba hahamora ny fampiasana azy. Ny fanavaozana lehibe indrindra an'ny solosaina mikasika dia ny fampiasana teknolojia multi-touch, izay manova tanteraka ny fomba fifandraisan'ny olona amin'ny solosaina.
Teo aloha:Fakafakao ny olan'ny fanaparitahana hafanana an'ny solosaina rehetra
Manaraka:Inona avy ireo tombony sy sandan'ny rafitra informatika amin'ny desktop cloud?